Su'aal Lufthansa Pack problem
1 sano 9 bilood ka hor #731 by bgf
Waxaan xiray Lufthansa xiran dhinacan waxaanan dhibaato ka qabaa Airbus A380.
Marka aan riixo badhanka qafiska ee NAV, COM, ADF iwm. Ma shaqeynayo. Taas macnaheedu waa inaanan sameeyn karin sifooyinkaan.
Haddii kale diyaaradani waa mid aad u wanaagsan, waxaanan rabaa in aan marar badan isticmaalo.
Waxaa laga yaabaa in qof i caawin karo?